Wasiirka Difaaca ee Soomaaliya oo ku baaqay in la joojiyo colaadda Gaalkacyo – Radio Muqdisho
Wasiirka Difaaca ee Soomaaliya oo ku baaqay in la joojiyo colaadda Gaalkacyo
Wareysi gaar ah oo warbaahinta Qaranka uu siiyay Wasiirka Gaashanadhigga Dwoladda Federaalka Somaaliya Mudane Cabduqaadir Sheekh Cali Diini ayuu kaga hadlay colaadda ka taagan magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug, wxuuuna Wasiirku meesha ka saaray wararka sheegaya in ciidanka xoogga dalka ay ka qeyb qaateen daagalada magaalada Gaalakcyo ku dhexmaray Maamulada Puntiland iyo galmudug.
Wasiirka ayaa xusay in Ciidanka xoogga dalka ay dhex dhexaad ka yihiin colaaadda Gaalkacyo, islamarkaana waajibkooda uu yahay inay ilaaliyaan oo ay bad baadiyaan shacabka .
“Waxaan rabaa inaan halkaan ka cadeeyo warar malamahana soo baxayay oo ah in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku lug leeyihiin dagaalada Gaalkacyo oo dad walaalo ah u dhexeeya, shacab badana ay khasaara kasoo gaareeen, ciidanka xoogga dalka waxay leeyhihiin astaamo ugaar ah oo lagu garto, mana ku lug laha wax halkasi ka dhacaya”ayuu yiri Wasiir Diini.
Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya Mudane Cabduqaadir Sheekh Cali Diini ayaa ugu baaqay waxgaradka, ganacsatada iyo culimada Gobolka Mudug inay ku dadaalaan joojinta dagaalka kusoo laa laabtay Magaalada gaalkacyo.
“Waxagaradka,Ganacsatada, culimada iyo maamulada labada gobol waa inay u istagaana joojinta colaadda Gaalkacyo, waayo dad walaalo ah ayaa is dilaya, aniga shaqsi ahaan si gaar ah ayaan ugala hadlay Madaxweynaha iyo Ra’iisul asaaraha dalka in arintaasi si deg deg ah wax looga qabto, weyna garawsadeen marka dadkaas walaalaha ah ha lakala dhaxgalo sidaa ayaan ku baaqayaa”ayuu hadalkiisa ku daray Wasiirka Difaaca ee Soomaaliya.
Gambia oo ku biirtay dalalka ka baxaya Maxkamadda Caalamiga ah ee ICC.
Madaxda Qaranka oo sagootin u sameysay safiirka Midowga Yurub ee Soomaaliya